Free Download Manager ~ mgkhainghtoo
21:36 မောင်ခိုင်ထူး No comments
မိတ်ဆွေများကို ဒီနေ့ ဒေါင်းလော့မန်နေဂျာလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ.. အတော်လေး
ကောင်းပါတယ်.. idm ထက်တောင်ကောင်းမလား...ဟိဟိ ဟုတ်မဟုတ်သိခြင် စမ်းကြည့်ပေါ့
ဒါလေးကတော့ ဒေါင်းလော့မန်နေဂျာလေး တစ်ခုပါ ဒီဒေါင်းလော့မန်နေဂျာလေးကို ကျွန်တော် ဘာလို.ကြိုက်ရသလဲ ဆိုရင် သူက ဆိုဒ်ကလဲပေါ့ပါးတယ် ပီး ကိုယ်ဒေါင်းနေတဲ့ ဖိုင်ကို အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် ရပ်ထားပီး နောက်နေ. မှ ပြန်ဒေါင်းရင် အဲ့ဒီ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက နေပြန်ဒေါင်းပေးနိုင်တယ် ။ ပီးသူက add on တွေဘာတွေ လုပ်စရာမလိုဘူး သူ.ကို သွင်းပီးတာနဲ. ကွန်ပြူတာ ညာဘက်ထောင့်နားလေး မှာ ဒေါင်းလော့ဘောစ်လေးပေါ်နေလိမ့်မယ် ဒေါင်းလော့ လုပ်ချင်ရင် ဒေါင်းလော့လုပ်လို တဲ့ ဘက်တမ်လေးကို ကလစ်ဖိပီ အဲ့ဘောက်စ်လေးထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ရင် ရပါတယ် ။ပီးတော့ speed ကလဲ IDM နေခဲ့တော့ပဲ။ ပီး IDM နဲ. ဒါနဲ. ဘာကွာသေးလဲ ဆိုရင် IDM က ဖိုင်တစ်ခုကိုဒေါင်းနေရင် ကွန်က ပြုတ်ကျသွားရော ဒီဒေါင်းလော့ဒါလေး ကြတော့ ဒေါင်းနေရင် တန်းလန်းနဲ. ကိုယ်ဖွင့်ခြင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကိုကွန်ကောင်းကောင်းနဲ. ဖွင့်လို.ရပါတယ်----------------------ကျွန်တော် လေရှည်နေတာနဲ. ဒေါင်းလော့ဒါလေး ရဲ. နာမည်တောင် မပြောမိဘူး သူ.နာမည်က free download manager တဲ့ ကဲ လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းပါ။
mediafire ကဒေါင်းချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်